Iskuullo Ammaan ah | SABAB (Isbahaysiga ka dhanka ah waxbarashada galmada ee aan badbaadada lahayn)
SABAB (Isbahaysiga ka dhanka ah waxbarashada galmada ee aan badbaadada lahayn)
Waalidiintu Waxay Ka Wada Hadlayaan Fikradaha Jinsiga ee Dugsiyada Amni
Fiidiyowyada Transgender-ka ee Qorayaasha
Borofisar John Whitehall oo 12 Video ah oo lagu duubay Dysphoria ee Jinsiga
Walt Heyer - Qoomamo Transgender
BARNAAMIJYADA DUGSIYADA SAFE
DHAMMAAN WAXBARASHADA DUGSIGA SAFE
WARBIXIN KU SAABSAN SABABTA
Nagu saabsan - Yoolalkayaga
Waalidiinta - Xuquuqdeena.
Afeef & Xuquuqda daabaca
Iskuulada aaminka ah ee iskuulada
Australia fikradaha jinsiyeed ee LGBT ee carruurta wax lagu baro dugsiyada waxaa markii ugu horraysay la keenay barnaamij lagu magacaabay Iskuullada Nabdoon. Maaddaama ay waalidiinta ka soo horjeedeen barnaamijka iyo foomka lagu soo bandhigo ayaa is beddelay marar badan oo sii waday in sidaas la sameeyo. Dhowr hay'adood oo kaladuwan ayaa soo saaray barnaamijyo dheeri ah oo ay macallimiintu sidoo kale ku adeegsadaan fasaladan jinsi.
In kasta oo la sheegayo in barnaamijyada Badbaado ee Iskuullada aysan khasab ahayn, haddana fikradaha ku saabsanaanta jinsiga ayaa hadda lagu soo daray barnaamijyadeena Waxabarashada Jinsiga oo khasab ah. Waxaan ka soo saarnay agabyada barnaamijyadan dhowr ah boggan si aad u hesho macluumaadkaaga.
Qalabka Waxbaridda ee Iskuulka.
Agabka Waxbarida Fikradaha Jinsiga ee Dugsiyada Amni.
Samatabbixinta Xuquuqda & Xiriirka Ixtiraamka leh. Qalabka Barashada Jinsiga.
Qalabka Barista Jinsiga ee Amni ee Qorsheynta Qoyska Victoria.
Qabashada Hore & Qabashada Qalabka Waxbarida ee Dambe.
Sawirro galmo aan habooneyn ayaa loo isticmaalay in lagu baro ardayda.
Sida loo sameeyo Asxaabtaada.
Aasaaska Kahortagga HIV ee Ragga Ragga.
Xorriyadda Macluumaadka - Barnaamijyada Dugsiyada Badbaada ee Victoria Australia.
CAUSE waxay u dirtay FOI si ay u ogaato waxa ku jira barnaamijka "Dugsiyada Badbaadada leh" ee ardayda la barayo. Tani waa jawaabta.
Macallimiinta Dugsiyada Badbaadada ah & Waalidiinta oo Taageera Agabyada.
Khariidadda PC binary
Xirmo Kheyraad Transgender ah oo loogu talagalay Macallimiinta.
Dadku waxay ka hadlaan Barnaamijyada Iskuullada Nabdoon.
Iskuullada Ammaanka ma'aha ku-meel-gaadhsiisid barnaamijka safka ee carruurta ee abaabulaha Marxist Roz Ward
Sheeko naxdin leh oo ku saabsan jinsiga xag-jirka ah ee dugsiga Aussie
Politicalpostingmumma waxay kahadashaa "Dugsiyada Badbaadada leh"
MACALINTA DHALINYARADA YR8!?!? - Mark Latham
Aragtida aabaha ee dhibaatada la yiraahdo 'Dugsiyada Badbaadada'
Iskuullada Ammaanka Badbaadada ayaa sii kordha sababta oo ah waalidiin badan ayaa cambaareeya barnaamijka
Galmada caruurta iskuulka Australia - Waxay ka dhigeysaa USA mid "hagaagsan"
Mark Latham: Tirakoobku wuxuu muujinayaa sababta barnaamijka Iskuulada Badbaadadu u socdaan
Xiriirro Xushmad leh - 'Dugsiyo Ammaan Leh' 2.0?
Kala hadlida golaha guurtida ee barnaamijka isuduwidda Safe Schools - Cori Bernadi
Sidee "ammaan" u yahay Iskuulada Nabdoon? Xildhibaan George Christensen
Wendy Francis - Waa maxay Gudaha Dugsiyada Ammaanku?
Daaweynta Isweydaarsiga: Dadka dhabta ah, Sheekooyinka dhabta ah
Isbedelka Galmada Isbedelada Fiidiyeyaasha
Sidee “amaan” u yahay Iskuullada Nabdoon?
Codsi Baaritaan baarlamaaneed oo ku saabsan isdhaafsiga jinsiga: Professor John Whitehall.
Copyright © 2020 SABAB (Isbahaysiga ka dhanka ah waxbarashada galmada ee aan badbaadada lahayn)